Natao zara mitovy ka hanana Distrika telo avy ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany. Nosy Varika, Mananjary, Ifanadiana no handrafitra ny Faritra Vatovavy ; ary Manakara, Vohipeno sy Ikongo no ho Faritra Fitovinany.
Voalaza araka ny tati-baovao fa « niray feo, niombon-kevitra amin’io fizarana io ireo Ampanjaka taranaka Ndrenony efatra mirahalahy avy any Ikongo sy ireo olom-boafidy aty an-toerana ».
Taorian'ny dinika dia nisy ny fifampizarana ny nofon-kena mitam-pihavanana araka ny fanao nentim-paharazana ao amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany.